Wax ka ogow wadamada ugu dadka dheer joog ahaan dunida | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Wax ka ogow wadamada ugu dadka dheer joog ahaan dunida
Wax ka ogow wadamada ugu dadka dheer joog ahaan dunida
Himilo FM – Hiddo raaca iyo cunnada dheelitiran waxay ka mid yihiin waxyaabaha loo tiirinayo dhererka badan ee dadka ku dhaqan qaaradda Yurub, dadka ugu dheer dunida joog ahaan waxay ku nool yihiin Netherland. Dhererka muwaadiniinta dalkan waxa uu gaaraa 1.838 Mitir / 6.03 Cag labada jinsi, nolol haggaagsan ayaa ka jirta sida laga soo xigtay hay’adda caafimaadka.
Wadamada kale waxaa ka mid ah Montenegro oo ah dal yar oo dhaca koonfurka bari ee isla Yurub, jooga dadka dalkan waa 1.832 Mitir / 6.01 Cag ragga iyo dumarkaba, waxaa ka jira dalkaasi hawo nadiif ah oo ka soo dhacda buuraha dhaadheer, nafaqo la’aana ma wajahaan carruurta reer Montnegro, waa mid ka mid ah waxyaabaha u horseeday in in laga helo dad joog dheer.
Denmark waxay u eg tahay inay tahay waddanka seddaxaad ee ay joogaan dadka ugu dheer jog ahaan dunida, dadkeeda waxaa la oggaaday inay helaan daryeel caafimaad oo hufan, intaa waxaa u sii raacsan dhaqaalaha soo gala dadka oo fiican, sidaa darteed, dhererka dadka Denmarka waa 1.826 Mitir / 5.99 Cag, taariikh hiddo dherer ah ayaa laga soo calaameeyay dalkaasi.
Norway celceliska jooga muwaadiniinta dalkaa waa 1.824 Mitir / 5.98 Cag, Serbia dhererka muwaadiniinteeda waa 1.82 M / 5.97 Cag, Dadka Germany joogooda waa 1.81 M / 5.93 Cag.
Dadka Croatia dhererkooda waxaa lagu sheegay 1.805 M 5.92 feet Cag. Inuu hiddo raac yahay ayaa loo garowsaday, Czech Republic, dadka deggan celcelis ahaan dhererkoodu waa 1.8031 M 5.92 Cag.
Previous: Afar arrimood oo uu Cristiano Ronaldo uga fiican yahay Lionel Messi
Next: 50 maalin ayuu u taagnaa dukaan jaceyl dartiis!